प्रकाश : ‘पिँधका मान्छेहरुको साथी’- जीवन आचार्य - Everest Dainik - News from Nepal
प्रकाश : ‘पिँधका मान्छेहरुको साथी’- जीवन आचार्य
जीवन आचार्य । २०७४ मंसिर ३ गते झिसमिसेमै गङ्गाको मोवाइल बज्यो, एक्कासी गङ्गाले आत्तिदै भनिन्, “भाइ बिरामी भएर हस्पिटल लगेको छ रे।” सोचें, सामान्य केही भएको होला । सायद भाई प्रकाश निरोगी भएका कारण पनि मैले त्यसो सोचेको हुनुपर्छ।
२०७४ मंसिर २१ गते तराईका जिल्लामा सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको चटारो थियो, म मोरङ् ६ (क) को उम्मेदवार भएका कारण निर्वाचनमा सहयोगका निम्ति सानी छोरी ईशान्वीसहित ठूलो भिनाजु सागर केसी विराटनगर आएको २ दिनमात्र भएको थियो।
निर्वाचनको समय भएका कारण बुवा (ससुराबुवा) त्यो दिन मंसिर ३ गते काँकडभित्ताको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि झापामा हुनुहुन्थ्यो । भाई बिरामी भएको खबरपछि गङ्गाले बुवालाई फोन सम्पर्क गरिन्। बुवाले ‘तुरुन्त आउनू’ भन्नुभएछ, त्यसपछि हामी झापा गयौं।
बाटोमा यात्राका क्रममा सामान्य नै होला भन्ने विश्वासका साथ झापा पुगियो। त्यहॉ पुगेपछि एकजना प्रहरीले ‘प्रकाशजीको बारेमा खबर नराम्रो छ’ भने । मलाई हस्पिटल लगेको छ, राम्रो भइहाल्छ नि भन्ने भयो । मानिसहरुको घुइँचो लागेको थियो, तात्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, माहोल एकदमै सुनसान थियो । त्यसै क्रममा हामीलाई लिन काठमाडौंबाट हेलिकप्टर आयो, हामी जब हेलिकप्टरमा बस्यौं, अध्यक्ष ओलीज्यूले बुवातिर हेर्दै भन्नुभयो, “जे हुनु भइहाल्यो, तपाईं लगायत परिवारलाई समवेदना छ” त्यो आवाज मेरो कानमा गुञ्जियो ।
याे पनि पढ्नुस प्रकाश र ज्ञानु दाहालको स्मृतिमा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने
म स्तब्ध भएँ, गङ्गालाई हेरें बुवालाई हेरें । यो के भएको हो, मन बेचैन भयो, ऑशु थामिएनन् । विगतमा भाइ प्रकाशसँग बिताएका हरेक पल स्मरण हुन थाले, मनमनै प्रार्थना गर्न थालें, “यो सबै गलत होस्, प्रकाशलाई ठीकठाक देख्न पाउँ । तर, समयले त्यसो गरेन, अन्ततः भाइ प्रकाशले हामीलाई साँच्चै याद मात्र छोडेर सदाका लागि बिदा लिईसकेको रहेछ ।
हामी एउटै छानामुनी लामो समय सँगै बस्यौं, भाइसँग मेरो छुट्टै सम्बन्ध थियो, हामी सालाभेना कम, साथी बढी थियौं, सायद उमेरले पनि होला। सँगै घुम्न जाने, क्रिकेट खेल्ने, रमाइलो गर्ने गथ्र्यौं हामी ।
वास्तवमा, प्रकाश सामान्य स्वभावको थियो, सोझो थियो, सामान्य कुरामा रमाउँथ्यो, बाटोमा राखिएका ठेलागाडाका मःम खॉदा औधी खुशी हुन्थ्यो प्रकाश । अनावश्यक खर्च नगर्ने बानी थियो । सामाजिक काम गर्न औधी रुचि भएका कारण उसले विदेशमा अलपत्र नेपाली युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउने अभियान नै चलायो । युवाहरुका हर समस्यामा प्रिय साथी थियो ऊ ।
याे पनि पढ्नुस आधार इलाकामा प्रकाश दाहाल !
उसको बारेमा केही भ्रम छरिए, उसमाथि निरन्तर प्रहार भइरह्यो । जीवनमा उसले चालेका सबै कदम रहर पक्कै थिएनन्, कति त बाध्यता पनि थिए । तर, दुनियाँले उनका बाध्यता बुझ्ने र खोतल्ने प्रयास कहिल्यै गरेन । कहिलेकाहीँ लाग्छ, ‘प्रकाशको बारेमा जस्तो गलत प्रचार गरियो, ऊ बिल्कुल त्यस्तो थिएन । आज उनी हामीसँग छैनन्, म घरिघरि सोच्छु, ‘समाजले प्रकाश भाइप्रति किन यति धेरै अन्याय गरेको होला ? उनका राम्रा काम र अनुकरणीय देन किन ओझेल पारिएको होला ?’
प्रकाशले बढ्दो उमेरसँगै आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लग्यो । दोस्रोपटक बुवा प्रधानमन्त्री हुँदा उसले सचिवालयमा बसेर गरेको मेहेनत अहिले पनि मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरु सम्झन्छन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा बुवाले गरेका धेरै निर्णयहरुमा भाइ प्रकाशको सहयोग, सल्लाह र बेजोड मेहेनत छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग महशुस अनि स्मरण हुन्छ ।
अन्ततः भाइ प्रकाशले छोडेर गएको पनि एक वर्ष पुगिसकेछ । समय बलवान छ, जीवनमा मृत्यु एकमात्र सत्य हो, यसमा भन्नु केही पनि छैन । तर, प्रकाशको जीवनमा मृत्यु छिटो आयो, यो नै हामी सबैका लागि ठूलो पीडाको विषय हो । भौतिक शरीर नभए पनि उसको देशप्रतिको माया, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी, यूवाप्रतिको स्नेह र मोह, अनि समृद्ध र आधुनिक नेपालका लागि गरेको योगदान सधैं स्मरणीय रहनेछ ।
भाइ प्रकाश!! व्यक्तिगत रुपमा तिमीले गरेको सहयोग र सम्मानप्रति रिणी छु, आभारी छु, जीवनभरि आभारी रहनेछु । तिमीले देखेका अधुरा सपना सकेसम्म पूरा गर्ने कोशिस गर्नेछु। यही नै तिम्रा लागि सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ । हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रिय भाइ !!
ट्याग्स: Jeewan Acharya, Prkash dahal